N'ikuku ana enweta n'otutu-Legit Apex mbanye anataghị ikike ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Otutu-Legit Apex mbanye anataghị ikike
Akụkọ gbasara Apex agaghị abụrịrị “egwuregwu ahụ” maka gị ọzọ, ọkachasị mgbe ị banyechara na Apex Legends Multi-Legit Hack.
Na-achọ ịnwale ihe? Zụta ụbọchị 1 iji nweta Apex Legends Multi-Legit Cheat!
Maara ihe ịchọrọ dị ka Onye Egwuregwu Egwuregwu - zụta igodo ngwaahịa 1-izu taa!
Mbanye anataghị ikike maka ogologo oge site na ịzụta onwe gị igodo ngwaahịa maka 1-ọnwa nke nnweta!
Ikike mbanye anataghị ikike ma akọ na n'ụzọ dị irè na-enweta n'ụzọ dị mfe mgbe ị na-arụ ọrụ na GamePron, nke ahụ bụ ihe akaebe na Apex Legends Multi-Legit Hack.
Apex Legends Multi-Legit mbanye anataghị ikike Ozi
Ihe ọzọ ewu ewu royale aha ya bilie! Apex Legends Hacks anọwo na-achọsi ike nwa oge ugbu a, ọ bụ ya mere Gamepron ji nyefee ha oge dị ukwuu. Anyị nwere ọtụtụ atụmatụ a hụtụrụla na Apex Legends hack (dị ugbu a!), Ha niile dị mma na 100%. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ihe niile Apex Legends Hack nwere ike iji mee ihe n’enweghị nsogbu, ị chọtala ebe dị mma. Ọ bụghị oge niile ka ị na-ahụ Apex Legends Cheat nke ejiri nka rụọ ya dị ka ihe kacha mkpa.
N'inwe ihe karịrị ihe ị hụtụrụla mbụ, anyị Apex Legends Multi-Legit Hack na-enye Onye Iro ESP, Ozi Iro (Anya, Ahụike, Ngwá Agha), Aimbot na Lock-On Target, na ọbụna Bunny Hop. Nke ahụ bụ mbido mgbe a bịara n’ihe atụmatụ dị n’ime anyị Apex Legends Multi-Legit Cheat!
Ama onye iro (Aha, Ogwe ahụike)
Ihe ESP na nzacha na anya
Aim ọkpụkpụ configurable
Yi palette na-agbanwe agbanwe
Chekwaa ma buru ihe edeturu
Streamable (Egwuregwu egwuregwu)
Banyere Apex Legends Multi-Legit
Ndị aghụghọ n’onwe ya dị mfe iji yana dịkwa mfe iji gbaa ọsọ. A maara Gamepron maka idebe ihe dị mfe, ebe anyị kwenyere na nke ahụ bụ ụzọ kachasị mma iji bịaruo hacking. Dị ka esịtidem eji Aghọ Aghụghọ Ule, ị nwere ike mkpa iji gbanyụọ nchebe site igbochi ndị aghụghọ onwe ya; mgbe ụfọdụ gị nchedo usoro ike ọkọlọtọ anyị Ndị aghụghọ dị ka nke. Nke a cheat-abịa onwem na ihe HWID spoofer niile nke anyị HWID machibidoro ọrụ dị ka nke ọma, na ị pụrụ ọbụna na-egwu na ihuenyo zuru mkpebi! Anyị ebipụghị akụkụ ọ bụla mgbe ọ bịara itinye akwụkwọ akụkọ Apex a, wee nwee ike ịhụ nke ahụ n'onwe gị.
Gini kpatara iji Apex Legends Multi-Legit karịa ndị ọzọ nyere gị ya?
You're na-mgbe na-aga na-akpata maka ojiji nke gị hacks, n'ihi ya, mgbe ị na anataghị ikike na a aghara n'ụzọ na machibidoro ị na-enweghị ike ịtụgharị uche ihe mere o mere. Anyị na-eme ya dị ka nchekwa dịka anyị nwere ike iji Apex Legends Hacks ebe a na Gamepron - anyị na-enye aghụghọ achọpụtaghị nke na-enye ọtụtụ atụmatụ ịtụnanya. Ọ bụrụ na ị na-achọghị na-ohere nke ịlụ machibidoro, gị mma nzọ bụ ịzụta gị Ndị aghụghọ si a pụrụ ịdabere na-eweta dị ka Gamepron. Chọrọ ịma ihe ọ dị ka imeri ọtụtụ egwuregwu Apex Legends gị? Ọfọn, iji Gamepron nwere ike ime ka ọ mee!
Kwesighi ichegbu onwe gị banyere ihuenyo enyo ma ọ bụ ọbụna enweghị nhọrọ ntụgharị na Gamepron, anyị ewerela ihe niile tupu anyị etinye Apex Legends Multi-Legit Hack. In-game menu bụ kensinammuo na nke ụzọ, ekwe ka ị hazie gị mbanye anataghị ikike nhọrọ na-enweghị adịkwa na-elekwasị anya. Were ọchịchị nke ahụmịhe egwuregwu gị ma hazie akụkọ gbasara Apex Legends iji kwado mkpa gị! Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ atụmatụ niile dị na Apex Legends Hack nwere ike ịhazi ya site na iji menu egwuregwu, yabụ ọ bụ ihe dị mkpa ịtụle tupu ịzụta igodo ngwaahịa. Aghọ aghụghọ ụzọ ziri ezi!
A2. Ee, nke a cheat bụ iyi àmà, na ọ ga-adịghị ahụ anya n'ihi na ndị na-ekiri.
A6. Multi-Legit na-arụ ọrụ dị ka mpụga eji Aghọ Aghụghọ Ule, nke pụtara na ị ga-agba ọsọ egwuregwu ahụ na-enweghị njedebe mode na enweghị ụzọ atọ Mmaji ihuenyo nwere ike ji mee.
Gini mere ị ga - eji dozie nsogbu ọzọ? Nke a bụ otu ihe kacha mma Apex Legends Cheats dị na web ugbu a, ọ ga - eduzi ndị ọrụ anyị na mmeri. Elegharala ngwaọrụ ndị ọzọ anya ma nweta ohere taa!
Chọta ihe kachasị mma ma chịkwaa iji GamePron!
Njikere Na-achị na Apex Multi-Legit mbanye anataghị ikike?